Madaxweynihii hore ee Puntland ahna murashax u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Faroole oo tagay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynihii hore ee Puntland ahna murashax u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Faroole oo tagay Muqdisho
January 21, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynihii hore ee Puntland ahna murashax u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan faroole oo tagay Muqdisho. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland ahna murashax u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa maanta oo Sabti ah tagay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen ilo-wareedyo.
Faroole ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho si diiran ugu soo dhaweeyay masuuliyiin katirsan dowladda, murashixiin madaxweyne iyo dad shacab ah.
Bishii April ee sanadkii lasoo dhaafay 2016-ka, ayaa Faroole iclaamiyay in uu u tartamayo madaxweynaha Soomaaliya.
February 15, 2017 Dooni ganacsi oo ku socotay Hobyo oo ku degtay biyaha Badweynta Hindiya
Dab balaaran oo dhaliyay khasaare dhaqaale oo ka kacay gudaha suuqa Bakaaraha ee Muqdisho
Puntland police forces arrest killer of former Bari deputy governor
Bosaso-(Puntland Mirror) Puntland security forces in Bosaso town of Bari region have arrested the killer of former Bari deputy governor, police official said. Bari police commissioner Colonel Abdihakim Hussein Yousuf told reporters that the killer is in the [...]